PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: July 2013
T.N.L.A တပ်ရင်း ၁၁၂ နှင့် ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်တို့ ရင်တိုက်ပွဲဖြစ်
တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တပ်ရင်း ၁၁၂ နှင့် ပန်ဆေးပြည် သူ့စစ်အဖွဲ့တို့ ဇူလိုင်လ၂၅ ရက် ညနေပိုင် ၅နာရီခွဲမှ ၆ နာရီခွဲအထိ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
TNLA တပ်ရင်း ၁၁၂ တပ်ရင်းမှ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ကန်ပါဖိုကျေးရွာ ထဲတွင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း လိုက်လံဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်နေသည့်အချိန်တွင် ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့နှင့် တစ်နာရီကျော် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။
TNLA-၁၁၂ တပ်ရင်းမှုးမှ ကျနော်တို့ ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း အတွက် ဒေသခံများနှင့်ဆွေနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန် ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နဲ့ ညနေ့ပိုင် ၅ နာရီခွဲကနေ ၆နာရီခွဲအထိ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်သည့်ဟုပြောသည်။
၂၅ရက်နေ့ ညနေ့ပိုင်း TNLA တပ်ရင်း ၁၁၂ နှင့် ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်တို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးဒဏ်ရာရစာရင်းကိုတော့ အတိအကျမရရှိကြောင်း တပ်ရင်းမှုးမှ ဆက် လက်ပြောပြပါသည်။
တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် တအာင်း နယ်မြေအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းကို ဆက်လက်တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၃
မြန်မာနိုင်ငံမှ အချမ်းသာဆုံးသူများသည် ၎င်းတို့၏ ပိုက်ဆံများကို နိုင်ငံအပြင်ဖက်သို့ ယူဆောင်သွားကြပြီး လန်ဒန်တွင် တန်ဖိုးမြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်။
နိုင်ငံရပ်ခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက အာရှ၏ “နောက်ဆုံး ကျန်နေသည့် ဈေးကွက်နေရာ” အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တန်းစီနေကြချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများက ယခင် မြန်မာ နိုင်ငံကို ကိုလိုနီပြုခဲ့သည့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် လန်ဒန်ဆီသို့ စီးမျောထွက်နေကြာင်း စစ်တမ်းတခုက ဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၂ လတာ ကာလအတွင်း လန်ဒန်နှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အခြားနေရာများသို့ ၀င်ရောက်လာသော မြန်မာတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏသည် ဟောင်ကောင်နှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံများမှ ၀င်ရောက်လာသည့် ပမာဏ နှင့် တူတူပင်ဖြစ် ကြောင်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ၏ ထိပ်တန်းဂျာနယ် တစောင်ဖြစ်သည့် PrimeResi မှ ထုတ်ဝေ ခဲ့သော စစ်တမ်းက ဆိုသည်။
“၂၀၁၃ ဧပြီလအထိ ၁၂ လ အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ၀ယ်ယူသူတွေဟာ စတာလင်ပေါင် ၂ သန်းကျော် (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ သန်း) တန်ဖိုးရှိတဲ့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ၀ယ်ယူမှုတွေရဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဟောင်ကောင်နဲ့ ဆွစ်ဇာလန် က ၀ယ်ယူမှု အတိုင်းအတာနဲ့ တူတူပါပဲ” ဟု လန်ဒန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ အိမ်ခြံမြေ အကြံပေး ကုမ္ပဏီ Knight Frank ၏ နောက်ဆုံးထုတ် “ကြွယ်ဝမှု အစီရင်ခံစာ”ကို
Posted by PNSjapan at 9:41 AM0comments
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဖြူးမြို့ နယ် သာဓုကန်ကျေးရွာ အုပ်စု ပန်ဂျကိုရီတိုလာကျေးရွာမှ နေအိမ်အထဲမှာ "အဖြစ်အပျက်က တုန်လှုပ်ခြောက်ချား စရာပါ၊ လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးနဲ့ သူ့ရဲ့ မိခင်မနိုင်နိုင်ဝင်းတို့ ဟာ အုပ်ထိမ်းသူ လူကြီး မိဘတွေရဲ့ တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ မိသားစု(ပုဂ္ဂလိက)စည်းကမ်းတွေအောက်မှာ ပြားပြားမှောက်ပြီး မနိုင်နိုင်ဝင်းရဲ့ ဘယ်ဘက်(၀ဲဘက်) ခြေထောက်မှာ သံကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ ချည်နှောင် သော့ခတ်ခံထားရပြီး ကျန်တဲ့ သံကြိုးစတစ်ဖက်ကို မနိုင်နိုင်ဝင်းအိပ်တဲ့ ကုတင်မှာ ချည်နှောင်လျက် ဒီကနေ့ အထိ ချုပ်နှောင်ခံနေရဆဲပါ။
ဒီလို သံကြိုးတန်းလန်းနဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို မတရားသဖြင့် ချုပ်နှောင်တားဆီးခံထားရတယ်ဆိုတာ အချိန်ကာလ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေကလွဲရင် ဘယ်သူမှ အတိအကျ
ဂျပန်မြန်မာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အနေနဲ့ ဘွဲ့ရ မြန်မာနိုင်ငံသား ၀န်ထမ်းတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခေါ်ယူနေပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်တို့ မြှုပ်နှံ ထားခဲ့သည့် ရွှေသုံး တန်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့က စတင်ရှာဖွေခဲ့ရာတွေ့ရှိပြီဟု ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ထဲတွင် ပါဝင်သည့် ဘူမိဗေဒပညာရှင် ပါမောက္ခ ဟောင်း ဦးစိုးသိန်းက ပြောသည်။ ''ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ကော်မတီဖွဲ့ပြီး တော့ ဆောင်ရွက်နေတာ''ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ကော်မတီထဲတွင်ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်အမည်များကို ၄င်းက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုသော်လည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဇီးကုန်း မြို့နယ်အတွင်း၌ ရှာဖွေနေသည်ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။ ''ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တူးဖော်မှု မှာတော့ နည်းနည်း အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေသေးတယ်''ဟု ပြော သည်။
ဂျပန်တို့အနေဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှ တိမ်းရှောင်ထွက်ခွာစဉ် မြှုပ်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင်များ၏ပြောကြား ချက်အရ သိရသည်။
အစိုးရသစ်ကာလအတွင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက မြှုပ်နှံထား ခဲ့သော ကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေနေမှုမှာ ဗြိတိသျှ စဖစ်ဖိုင်း ယားပြီးလျှင် ယခု ဂျပန်ရွှေသုံးတန်မှာ ဒုတိယ
မြန်မာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆင်းနေမှုကြောင့် T.N.L.A နှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ဓါတ်ပုံ-PSLF/TNLA မဟာမိတ်အဖွဲ့ UNFC အလံတော်ပါ၊
T.N.LA တပ်ရင်း ၁၀၁ နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ ယနေ့ ၂၃ ရက် ညနေ့ပိုင် ၄နာ၇ီ ၁၅မီနစ် အချိန်တွင် မန်တုံမြို့နယ် ပန်ကန်ကျေးရွာအနီးတွင် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ် စစ်သာများမှ T.N.L.A ထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း ထိုးစစ်ဆင် လာခြင်းကြောင့် မန်တုံမြိုနယ် ပန်ကန်ကျေး ရွာတွင် နှစ်ဖက်တပ်များ ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပွားနေကြရကြောင်း T.N.L.A တပ်ခွဲမှူးမှ ပြောသည်။
တိုက်ပွဲကတော့ ညနေပိုင် ၄ နာရီလောက် နှစ်ဖက်တပ်များ စပစ်ကြာတာ အခုချိန်ထိ ပစ်ခတ်နေကြ
ကျုပ်တို့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပညာမတတ်အောင် နှိမ်ထားတယ် ပညာတတ်တဲ့သူကျတော့လည်း နေလို့မရအောင် မောင်းထုတ်ထားတယ်၊၊ ကဲအခုတော့သိပါပြီ၊၊ ဒင်းတို့လုပ်ချင်ရာလုပ် ဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်မယ့်သူ မရှိအောင် လုပ်တာမဟုတ်လား၊၊
ဘာမသိညာမသိနဲ့ ရောင်းစားထားလိုက်တဲ့ မြေပုံတွေ ကြည့်တောင် မကြည့်ရဲလောက်အောင်ပါလား၊၊ ဒါနဲ့ ဒီလောက် ရောင်းစားထားတာတောင် ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ အကြွေး ၄ သိန်းတင်တယ် ဆိုတာပါလား
အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တို့ကို အားကိုးပါတယ် မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံး လက်ကျန် သံယာဇာတတွေပါ ရောင်းချကုန်ပါပြီ၊၊ ဒီသံယာဇာတတွေ မရှိမှတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖက်ဒရယ် ရရင်ကော ဘာအကျိုးထူးတော့မှာလဲဗျာ၊၊
National Reconcilation & EITI မလုပ်နိုင်ခင်မှာ စာချုပ်တွေအကုန် လက်လွန်ကုန်ပြီ၊၊၊ Civil Society ပါတယ်ဆိုရုံသိ သူတို့စာချုပ်အကြောင်းရှင်းပြ နားထောင် သဘောတူတယ် ဆိုရုံလောက် အာလီဘိုင်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့.... ???
Ah Phu(FB) စာမျက်နှာသတင်းမှ
Posted by PNSjapan at 9:23 AM0comments
လက်ရှိ၌ TNLA ဒေသတွင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ ၃၀၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ အကြားတွင် ရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤဒုက္ခ များအတွက် စားနပ် ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ နေရကြောင်း၊ ပြည့်စုံ လုံလောက်စွာ
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည် ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး (UNHCR)၊ ထိုင်းအစိုးရနှင့် မြန်မာ အစိုးရတို့ သုံးပွင့်ဆိုင် သဘောတူညီမှု ဖြင့်သာ မြန်မာ ဒုက္ခသည်များအား နေရပ်သို့ ပြန်ပို့သင့်ကြောင်း UNHCR နှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) တို့က ပူးတွဲတောင်းဆို လိုက်သည်ဟု UNFC အတွင်း ရေးမှူး (၁) ဖြစ်သူ ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။
“ ဆွေးနွေးပွဲကို မနေ့က ဇင်းမယ် UNFC ရုံးမှာ တွေ့ဆုံပြီးတော့ သဘော တူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကတော့ ကျနော်တို့ UNFC နဲ့ အစိုးရတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒုက္ခသည်အရေးကိစ္စ အစီအစဉ် ရှိသလား ဆိုတာ သိချင်တယ်။ ပါတယ်ဆို ရင်လည်း UNHCR မဟာမင်းကြီး ရုံးဖက်က သတင်းအချက်အလက် အရပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာ အရပဲဖြစ်ဖြစ် အထောက်အကူ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် လာပြီး ပြောတာပါ။ UNHCR အနေနဲ့ကတော့ လောလောဆယ် အနေအထားမှာ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ပို့ဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးပါဘူး။ တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ အချိန်မှာမှ သုံးပွင့်ဆိုင် လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ပြန်ပို့မှာပါ” ဟု ဆိုပါသည်။
ဒါ့အပြင် UNHCR သည်UNFC နှင့် အစိုးရတို့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကြားနေအဖြစ်သာနေပြီး ဒုက္ခသည်များ အတွက် လူ့အခွင့်ရေးရှု့ထောင့်မှ အကူအညီ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အတွက်လည်း UN ရုံးချုပ်ရှိ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးမှ သွယ်ဝိုက်သည့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၆၆)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်တင်ပြချက်
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို ကျေးဇူးတင်ချင်ရင် ဒီနိုင်ငံဟာ ပြည်ထောင်စုသားအားလုံးအတွက် ခိုလှုံရာ ၊ လွတ်လပ်ရာ ၊ လုံခြုံရာဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြပါ
(၆၆)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်တင်ပြချက်
ရိုက်ကူး - ဇေကြီး၊ အောင်ကြီး
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဖြစ်သော ထိုင်းတောင်ပိုင်း ပရာဂျွဇ် ခီရီခန် ခရိုင်ရှိ ဗာန်စဖန်နွဲ့ (တံတားလေး ကျေးရွာ) နှင့်ဗန်စဖန်ယိုင်း (တံတားကြီး ကျေးရွာ) အကြားရှိ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ဘိတ်ခရိုင် တပ်ဖွဲ့ များ၏ ခြေစိုက် စခန်း ဖြစ်သော သုမင်္ဂလံ ကျေးရွာ အတွင်းသို့ တနင်္သာရီတိုင်း ခမောက်ကြီး အခြေစိုက် အမှတ် (၂၀) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ကျောက်ထနောင်း ကျေးရွာ အခြေစိုက် ခမရ ၅၈၁
Posted by PNSjapan at 9:39 AM0comments
အလောင်းမင်းတရားက အင်္ဂလိပ်ဘုရင် King George II ကို ပေးပို့ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ရွှေပေလွှာတစောင်ဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံက နယ်ဘက် စာကြည့်တိုက်တခုမှာ ရောက်နေပါတယ်။
ရွှေသား အတိပြီးတယ်ဆိုတဲ့ ဒီစာမှာ ပတ္တမြား ၂၄ လုံးကိုလည်း လှလှပပ တန်ဆာဆင်ထားတာပါ။
ဆင်စွယ်ဘူးနဲ့ ထည့်ပို့လိုက်တဲ့စာ (ဓာတ်ပုံများ - NDR/ဂျာမန်ရေဒီယိုဝက်ဆိုက်)
ဒီစာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ဝန်းကျင်မှာ ပေးပို့လိုက်တဲ့စာပါ။
အင်္ဂလိပ် ဘုရင်လက်ထဲကို ရောက်ဖို့ ၂ နှစ်လောက် ကြာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်က သူ့ဇာတိမြေမှာ ရှိတဲ့ စာကြည့်တိုက်ကို ပို့လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခမ်းအနားတခု မကြာသေးခင်က ပြည်ပမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပုံကို http://www.youtube.com/watch?v=Cd3gekCyZz8 မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စာကိုသိမ်းထားတဲ့
ထို့ပြင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေးကို ဆောင်ရွက် နေသည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရ အဖွဲ့နှင့်လည်း နားလည်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ရထားပြီး ဖြစ်ကာ လွှတ်တော်၌လည်း ပါဝင်
မြန်မာပြည်အတွင်း နိုင်ငံခြားမှ ၀င်လာသောငွေ၏ အကြီးမားဆုံးသည် တန်ဘိုး အနဂ္ဂ ကြီးသော ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းနှင့် သဘာဝတွင်းထွက် ဂစ် များအား စုပ်ထုတ်ရောင်း ချခြင်းဟု သိရသည်။ ယခင် ဦးသန်းရွှေ စစ်အုပ်စုနှင့် ယခု ဦးသိန်းစိန်တို့၏ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးက တိုင်းပြည်၏ ၀င်ငွေပမာနအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွားဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုကြောင်းကို ယခု တိုင်ပင် ရှိနေလေ သည်။ တိုင်းပြည်၏ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ၀င်ငွေပမာဏအား ယနေ့ထိ ဘယ်လို ရရှိသည်၊ မည်သို့ စီမံသုံးစွဲသည် ဆိုသော အချင်းရာအား ဖွင့်ထုတ်ဖေါ်ပြခြင်း မရှိသည့် အပြင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအား အဆိုပါဝင် များတွင် စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိနေသောကြောင့် မည်သို့မည်ပုံ ရရှိသုံးစွဲနေသည်မှာ ခန့်မှန်းတွက် ဆနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော အနေထားတွင်ရှိနေရခြင်းနှင့် အကျိုးမြတ်ခွဲဝေရယူမှုအနေထား ဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည်ကပင် အလွန်ရှည်လျှားသော မြန်မာပြည်၏
တိုင်းရင်းသားများက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေသူ လိုလား
နောက်တကြိမ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အကြိုညှိနှိုင်းပွဲ ကျင်းပတဲ့အခါ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေသူတွေ ပါဝင်ဖို့ တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်အဖွဲ့ဘက်က ညှိနှိုင်းခဲ့ရာမှာ အစိုးရဘက်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (ယူအန်အက်ဖ်စီ) ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလက ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ တွေ့ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် နောက်တကြိမ် ထပ်တွေ့ဆုံကြဖို့ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အဖွဲ့အချင်းချင်း တွေ့ဆုံကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ ဦးလှမောင်ရွှေဦးဆောင်တဲ့ အလုပ်အဖွဲ့နဲ့ ပဒိုမန်းမန်းဦးဆောင်တဲ့ ယူအန်အက်ဖ်စီ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ အလုပ်အဖွဲ့တို့ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်နေ့က
တိုကျိုမှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပတဲ့ (၆၇)ကြိမ်မြောက် ဝိဥာဉ်ပွဲတော်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလှိုင်လ (၁၆)ရက်။
၀ိဥာဉ်ပွဲအကြောင်း အတူသွား ဂျပန်မိတ်ဆွေရှင်းပြတာကတော့ ... တိုင်းတပါးမှာ စစ်ထွက်ကြရတဲ့ ဂျပန်စစ်သားလေးတွေ စစ်မြေပြင်မှာ သေချာပေါက် သေဆုံးကြရမယ် ဆိုတာ သူတို့တွေ သိနေကြတယ် စစ်သားလေးတွေ အိမ်ပြန်နိုင်မည့်သူအလွန်ခဲရင်းတယ် ဆိုတာ သူတို့တွေသိနေကြတယ် ...
ဂျပန်နိုင်ငံကနေ မထွက်ခွါခင်မှာ yasukunijinja ဘုရားကျောင်းမှာ စစ်သားလေးနဲ့ မိဘတွေက ကတိပြုခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ ၀ိဥာဉ်တွေ သေချာပေါက် yasukunijinja ဘုရားကျောင်းကို ပြန်လာခဲ့မယ် မိဘတွေလဲ သေချာ မျော်နေကြတယ် အ၀ါရောမီးပုံလေးတွေမှာ သူတို့နိုင်ငံအတွက် ကျဆုံးသွားကြတဲ့ ဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့ နာမည် အရပ်ဒေသ စာတန်းတွေ ထိုးထားပါတယ်... ၃ ရက်တိုင်တိုင် ပွဲတော် ကျင်းပပေးတယ် .... ပွဲတော်မှာ ရပ်နီးရပ်ဝေး မိသားစုဝင်တွေက ဟော်ခန်းကြီးတွေမှာလဲ ဂျပန်သံဃာတော်တွေကို ပင့်ဖိတ်ပြီး သူတို့ရိုးရာအတိုင်း ကောင်းမှုကုသိုယ်တွေပြုပေးကြတယ် ...
အထူးခြားဆုံးကတော့ ကျောင်းဝင်းအလည်လောက်မှာ အဖြူရောင် စလိုက်မီးကို ကြက်ခြေခတ် ထိုးထားတဲ့နေရာလေးက ၀ိဥာဉ်တွေ ရောက်လာတဲ့နေရာလမ်း သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
ကျင်းပလာတာလဲ ၁၉၄၆ ခုနှစ်ကတည်းက ကျင်းပလာတာ (၆၇) ကြိမ်ရှိခဲ့ပါပြီ .
“ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် မူဘောင်ဆွေးနွေးဖို့ တင်ပြတယ်။ သူတို့က အဲဒီအဆိုကို တင်ပြသွား တယ်။ နိုင်ငံရေးမူဘောင် ဆွေးနွေးဖို့ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့တော့ ရှိတယ်။ ဒါကို ဒီလ (၂၀) ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း အကြောင်းပြန်မယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်” ဟုဆိုပါသည်။
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များသည် တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အဆိုတခုသာ တင်ပြခဲ့ ပါသည်။ UNFC ဖက်ကမူ တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို လက်မှတ် ထိုးရမယ် ဆိုပါက နိုင်ငံရေးသဘော တူညီချက် ရရှိရန် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင် ပါကိုပါရှိ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုမပါလျှင် ရှေ့ဆက် သွားနိုင်လိမ့်မည် မထင်ကြောင်း
မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလှဲရေးဟာပါကြောင့်အပေါ်ယံသာဖြစ်နေရတလဲ....Bertil Lintner (VOA)
WHY REFORM IN BURMA IS ONLY SKIN DEEP
....Bertil Lintner (VOA)
၀ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့သည် ဇွန်လ (၁၈) ရက်နေ့၌ ရှိခဲ့သော တပ်တည်နေရာများ အတိုင်း ပြန်လည်နေရာယူကြရန် နှစ်ဖက် သဘောတူ ခဲ့ကြသဖြင့် ပြေလည်မှု ရရှိသွားပြီး ဖြစ်ကြောင်း UWSA ပြောခွင့်ရသူကို အခြေခံပြီး တရုတ်ပြည် နယ်စပ် အခြေစို...က် ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆိုပါသည်။
UWSA နှင့် အစိုးရတို့သည် သဘောတူညီချက် (၅) ချက်ဖြင့် ပြေလည် သွားကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ယင်းသဘောတူ ညီချက်များမှာ-
၁။ ယခင်ပြည်နယ် အဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများမှ သဘော တူညီချက်များအား နှစ်ဖက်စလုံးမှ ဆက်လက် အလေးထား လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်။
၂။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့်'၀' အထူးဒေသ(၂) တို့အကြား လက်ရှိ တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်သော နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အစဉ်အလာ ကောင်းများကို
ထို့ကြောင့် သမ္မတသိန်းစိန်အစိုးရ၏ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို အပစ်အခပ်ရပ်စဲခြင်း မပြုလုပ်သေးသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမှတဆင့် နိုင်ငံရေးအရ အနှစ်သာရပြည့်ဝသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို ကျင်းပ၍ ပြည်ထောင်စုပြဿနာအလုံးစုံတို့ကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် အဖြေရှာရန်လည်း
“ မြန်မာရိက္ခာတင်စစ်ယာဉ်တန်း မနေ့က (ဂျူလိုင် ၁၀ ရက်)က လွယ်ပါကေမှာ အဝိုင်းခံထားရတဲ့ သူတို့ တပ်စခန်းဆီပို့ဖို့ ဝ တပ်စခန်းဆီမှာ လာခွင့်တောင်းတယ်။ ရိက္ခာ တာဝန်ယူပို့ပေမယ်ပြောတော့ ဗမာစစ်တပ် သဘော မတူဘူး။ ပြောကြဆိုကြ ငြင်းကြခုန်ကြနဲ့ မနေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ မလိုလို တောင်ဖြစ် ခဲ့ရတယ်။ အင်အားဖြည့်ဖို့ ထပ်ရောက်လာကြတဲ့ ဝ တပ်ဖွဲ့ကိုလည်း လွယ်ဆမ်ဆုမ်မြန်မာ စခန်းက ဖြတ်သန်းခွင့်မပေးဘူး။ လက်နက်မပါနဲ့။ စစ်ဝတ်စုံမဝတ်နဲ့လို့ပြောတယ်။ အဲတာကြောင့်အခု လွယ်ပါကေထဲကို ဝ ဘက်ကလဲ ဝင်လို့မရ မြန်မာစစ်တပ်ကလဲဝင်လို့မရ အဲလိုအခြေ အနေဖြစ်နေ တယ်”
ယင်းက ''လေဆိပ်မှာ မိုင်းရှာ ကိရိယာတွေ အပြင် လုံခြုံရေးတပ် ဖွဲ့အင်အားကို နှစ်ဆတိုးပြီးတော့
UWSA သည် မူလက ၄င်းတို့၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ရှောင်းမီလျံကို အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ရာထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အစိုးရဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် များမှာ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းဇော် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဟု သိရ
ထိုသို့ပြန်လာချိန်တွင် အတူပြန်လာသည့် အမျိုးသားကသမိုင်းဘူတာရုံလမ်းရှိ တည်းခိုခန်းသို့ခေါ်ဆောင်ရာ သူမကလိုက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက်သူမကို ခေါ်ဆောင်လာသော အမျိုးသားကတစ်ဦးတည် အပြင်သို့
ကိုလံဘီယာတွင် အသုံးပြုနေသည့် BRT ယာဉ်ကြောမြင်ကွင်း
BRT စနစ်ဆိုတာဟာ အဆင့်မြင့် ဘတ်စ်ကား ပြေးဆွဲဖို့ အခြားယာဉ်တွေ အသုံးပြုခွင့် ပေးမထားတဲ့ သီးသန့်ယာဉ်ကြော သတ်မှတ်ပေးထားပြီး ဘူတာရုံသဖွယ် သတ်မှတ်ပြီး ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွေ ထားရှိ ပြေးဆွဲတဲ့စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘတ်စ်ကား ပြေးဆွဲမှု စနစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းအရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ကိုအောင်စိုးကို ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်ချမှတ်
ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် ကိုအောင်စိုးကို လက်ပံတောင်းအရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွှေဘိုမြို့နယ်တရားရုံးမှာ မနေ့က ပြစ်မှုပေါင်း ၈ ခုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ် အမိန့်ချလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို အမိန့်ချခံရတဲ့ ပြစ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးသွားရောက်ခဲ့သူ ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင် မမိုးမိုးက RFAကို ပြောပါတယ်။
"ပထမတစ်ကြိမ် အမှုချတာကတော့ ၁၈၈ နဲ့ ချတာ၊ အဓိကကတော့ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု၊ သင်္ကန်းကိုအလံလုပ်တာပေါ့ အဲဒါကျတော့ ဘာသာသာသနာညှိးနွမ်းစေမှုပေါ့၊ ပြီးရင် တရားမဝင်လူစုလူဝေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု ၈ မှုနဲ့ ထောင် ၁ဝ နှစ်ချလိုက်တာ၊ ပထမအမိန့်ရယ်၊ ဒုတိယအမိန့်ရယ် အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ ၁၁ နှစ်ခွဲပေါ့၊ မနေ့က ရွှေဘိုမြို့နယ်တရားရုံးမှာ အမိန့်ချလိုက်တာ"
ကိုအောင်စိုးကို အခုလို ပြစ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ အမိန့်ချလိုက်တဲ့အတွက်သူ့အမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေက အယူခံဝင်သွားဖို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။မနေ့က လက်ပံတောင်း အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမိန့်ချမှတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာ ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် ကိုအောင်စိုးအပြင် လက်ပံတောင်းဒေသခံ ဆည်ထဲရွာသား ကိုစိုးသူနဲ့ ကိုမောင်စန်းတို့ကိုလည်း လက်ပံတောင်းအရေးကိစ္စမှာ ဆူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှု၊ တားမြစ်မိန့်ချိုးဖောက်မှု၊ တရားမဝင် လူစုလူဝေး
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC နှင့် အစိုးရ တို့သည် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ် ဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ပြီး နှစ်ဖက် နည်းပညာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ (Technical Team) များ အကြို ညှိနှိုင်းရန် လာမည့် ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောခွင့်ရသူ ပဒိုမန်းမန်းက ဆိုပါသည်။
UNFC အဖွဲ့၏နည်းပညာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ကို KNU အတွင်းရေးမှူး (၂) ပဒိုမန်းမန်းက ဦးဆောင်ပြီး အစိုးရ ငြိမ်းချမ်ရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ (UPWC) ၏ နည်းပညာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့
Posted by PNSjapan at 9:17 AM0comments
တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေပေါ်ပေါက်မှ သမဂ္ဂတွေရပ်တည်နိုင်မည်ဟု ဗကသအဖွဲ့ပြော
ဆဲဗင်းဂျူလိုင် ၅၁နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို သန်လျင်မြို့ အိုးဝေပညာဒါန သင်တန်းကျောင်းမှာ ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့က ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်တွေက ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 7:51 PM0comments
မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များ ကချင်အဖွဲ့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေစဉ်။ (မေလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၃)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တက်လာခဲ့တဲ့ အရပ်သားအစိုးရ အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ နဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့မှာ အစိုးရက အသစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း လိုက်တာပါ။ အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါဝင်တဲ့ ဒီ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ ဒုသမ္မတတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း၊ ဦးဉာဏ်ထွန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တို့ အပါအ၀င် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တို့
Posted by PNSjapan at 7:46 PM0comments
ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရနှင့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ပါ အချက်များ ပြည်သူသို့ ချပြမည်ဟုဆို
ဇူလိုင် ၅ ရက်က တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏ မြန်မာမီဒီယာ တွေ့ဆုံပွဲကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်စဉ် (ဓာတ်ပုံ-ထက်ရှိုင်း)
ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရနှင့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ပါ အချက်များကို ပြည်သူသို့ ချပြမည်ဟု မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီမှ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာ Gen Yi က ပြောကြားသည်။
ဇူလိုင် ၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော တရုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီမှ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာ Gen Yi က ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီသည် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအား မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
လာမည့်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စာချုပ်သစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရ၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတို့ အကြား အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေမှု ကိစ္စရပ်များ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ စီမံကိန်းမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ် များထဲမှ ဒေသခံများ အတွက် လူမှုရေးနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း(Cooperate Social Responsibilities) ကိစ္စရပ်များအား ပြင်ဆင်ချုပ်ဆို သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို
Posted by PNSjapan at 5:57 PM0comments
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်နှင့် အဆိုပါဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိများသည် မေလအတွင်းက သွားခဲ့သည့် ဂျပန်ခရီးစဉ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များကို တွေ့ဆုံကာ အလုပ်သမားအရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အငြိမ်းစား အစိုးရ ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် JITCO (Japan International Cooperation Organization)
ဆဲဗင်းဂျူလိုင် အခမ်းအနားတွေ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေ
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ နံနက်အာရုဏ်တက်ချိန်တွင် စစ်အစိုးရရဲ့ ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးပုံ
လာမယ့် ၅၁ နှစ်မြောက် ဆဲဗင်းဂျူလှိုင် အခမ်းအနားတွေကို ၂ဝဝ၇ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေက တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ အဓိကကျင်းပနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဆီက ခွင့်ပြုချက် ရရှိအောင် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ တ.က.သ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ကိုစည်သူမောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
မြို့တော်တော်များများမှာ ဆဲဗင်းဂျူလိုင် အခမ်းအနားတွေကို ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့မှာတော့ ခရိုင် ၅ခု စုပေါင်းပြီး ပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေ စကားရည်လုပွဲတွေ ကျင်းပသွားမယ်လို့ ဗ.က.သ များအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီဝင် မဖြိုးဖြိုးအောင်က ပြောပါ တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဆဲဗင်းဂျူလိုင် အခမ်းအနားတွေကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက ကျင်းပခွင့် မပေးခဲ့တဲ့အတွက် နေရာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီး အခမ်းအနားမကျင်းပမီ တစ်ရက်အလိုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကို မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း (ကာလုံ) ကိုတော့ ပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီ။
သမ္မတ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစ်ိန်ပင် ထုတ်မပြောခဲ့သော (ကာလုံ) အကြောင်းနှင့် (ကာလုံ) အစည်းအဝေးခေါ်ဖို့ စပြောလာသူ၊ (ကာလုံ) ကို ဗြောင်ပွဲထုတ်လာသူမှာ အမေရိကန်မှ ပူပူနွေးနွေးပြန်လာသူ ဗိုလ်ရွှေမန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်က (ကာလုံ) အပါအဝင် သော့ချက်နေများကို သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးကို ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြလိုက်တာလို့ ပထမအချက်အနေနဲ့ ယူဆပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ (ကာလုံ) ဗြောင်လှုပ်ရှားလည်ပတ်တော့မယ်လို့ ကြေညာတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲမှာ ဝါစဉ်အရ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ဗိုလ်ရွှေမန်း ယူပါလို့ သမ္မတ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်က လွှဲအပ်ခဲ့ပြီးနောက် အခုလို (ကာလုံ) ကိစ္စတွေ အသံထွက်လာတာပါ။ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။
ဗိုလ်သိန်းစိန်က ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို ဗိုလ်ရွှေမန်းကို လွှဲပေးလိုက်ခြင်းဟာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲမှာ ဗိုလ်သိန်းစိန်အခန်း ကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဆိုတာ အခြားသော ဒီမိုကရေစီပါတီတွေလို ပါတီဝင်ထုရဲ့ မဲဆန္ဒနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျတင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်ပုံစံအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး စီနီယာက
လွတ်လပ်ပြီးနောက်ပိုင်း သမိုင်းတလျောက် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ပြဿနာတွေ ကြုံခဲ့သလို ပြည်တွင်း စစ်မီးတောက်လောင်ရာမှာလည်း အကြောင်း တခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါ မြန်မာအစိုးရ ၀န်ကြီးအချို့ကလည်း ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ တိုင်းရင်း ရှုထောင့် အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
UWSA နှင့်အစိုးရ ဆက်ဆံရေးရုံး ပိတ်သည်အထိ ဆက်ဆံရေးတင်းမာ
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် ၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ပါတီ (UWSA) တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသမှ စခန်း တစ်ခုကို ၀ိုင်းထားသည့် အခြေအနေမှ ယခု ဆက်ဆံရေးရုံးပါ ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှ စစ်ရေး အကဲခတ်သူ ဦးအောင်ကျော်ဇော်သည် UWSA ပြောခွင့်ရသူကို အခြေခံပြီး ယနေ့ ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ တာချီလိတ်နဲ့ကျိုင်းတုံမှာ ရှိတဲ့ ဆက်ဆက်ရေးရုံးတွေကို ပိတ်လိုက်ရပြီး။ ၀တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကို ဆက်သွယ် ထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကိုလည်း ဖြတ်တောက် လိုက်သလို UWSA အဖွဲ့ကိုပါ အစိုးရဘက်ကဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်” ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆိုပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အစိုးရဖက်မှ တဖြည်းဖြည်း တင်းမာလာသဖြင့် UWSA သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ တတိယ အပတ်မှ စတင်ပြီး ၄င်းတို့ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များ အားလုံးနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအား အရေးကြီး ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ခရီးသွားလာပါက လက်နက်များ ယူဆောင် သွားရန်နှင့် စစ်ရေးအတွက် အသင့် ပြင်ဆင်ထားရန် အမိန့် ထုတ်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေ တင်းမာသည် ဆိုသော်လည်း ယခုအထိ တိုက်ခိုက်ကြခြင်း မရှိသေးပေ။ သို့သော် အစိုးရ တပ်များသည် UWSA တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့အပေါ် တဖြည်းဖြည်း အကြပ်ကိုင်
တအာင်းဒေသ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး TNLA စစ်ဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တာဟိုပလန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
“စနိုးဒင်း၏ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံမှုကို နိုင်ငံအများအပြား ငြင်းဆို”
အမေရိကန်၏ ထောက်လှမ်းရေး လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်သူ အက်ဒွပ် စနိုးဒင်းအတွက် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ရမည့် အခြေအနေမျိုး ရောက်မလာနိုင်သေးချေ။ ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံစဉ်းစားမည်ဟု ပြောဆိုထားသည့် ဘိုလီးဗီးယား သမ္မတ အီဗို မွန်ရာလက်စ်၏ လေယာဉ်သည် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် သတ်မှတ် လမ်းကြောင်းမှ သွေဖီကာ ဩစတြီးယား နိုင်ငံတွင် ဆင်းသက်ခဲ့ရသည်။
မွန်ရာလက်စ်က မိမိသည် စနိုးဒင်း၏ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ကို လက်ခံ စဉ်းစားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး နာရီပိုင်း အကြားတွင် ယင်းအခြေအနေနှင့် ကြုံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘိုလီးဗီးယား သမ္မတ၏ လေယာဉ်ပေါ်တွင် စနိုးဒင်း လိုက်ပါသွားသည်ဟုလည်း သံသယ သတင်းစကားများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
ဘိုလီးဗီးယား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဒေးဗစ် ချိုကွီဟွန်ကာက ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့် ပေါ်တူဂီတို့သည် ၎င်းတို့၏ လေပိုင်နက်ကို ဖြတ်သန်းခွင့် မပေးသဖြင့် သမ္မတ၏ လေယာဉ်မှာ လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ရကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ "သမ္မတ လေယာဉ်ဟာ ဗီယန်နာမှာ မဖြစ်မနေ ဆင်းသက်ဖို့ တွန်းအားပေး ခံခဲ့ရတယ်"ဟု ချိုကွီဟွန်ကာက လာပက်ဇ်တွင် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းက လေယာဉ်သည် အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး သမ္မတ၏ အသက်အန္တရယ်ပင်
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ အတွက် ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ ရှစ်လေးလုံး ၂၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ညီလာခံက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တိုမြို့မှာ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ကနေ ၃ဝ ရက် နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီညီလာခံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံကနေ စစ်သုံးပစ္စည်းတွေ မ၀ယ်ယူဖို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တားဖြစ်ချက်ကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးရုံးရဲ့ အရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို အမေရိကန်အစိုးရက အရေးယူဒဏ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ အဆက်သွယ်ဖြတ်မယ်လို့ မြန်မာအစိုးရက ပြောထားပေမဲ့ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာ ဆက်သွယ...်မှုတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ အကဲခတ်တချို့က သုံးပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက လက်ခံလာနိုင်တဲ့အထိ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြသသင့်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ မစ်ဇိုင်း သုသေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန အကြီးအကဲ၊ ကာကွယ်ရေး ဌာန ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးရုံး (DDI) ရဲ့အရာရှိချုပ်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး အပေါ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာကြား လက်နက် ရောင်းဝယ်မှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်လိုက်ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အင်္ဂါနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးဟာ ကာကွယ်ရေးဌာန ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးရုံးရဲ့ ကိုယ်စား မြောက်ကိုရီးယားထံကနေ မြန်မာ စစ်တပ်အတွက်
Toyota ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ဖွံ့ဖြိုးစဈေးကွက် ဖြစ်လာသည့် မြန်မာ၊ ကင်ညာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ဈေးကွက်များတွင် ဈေးကွက်ဝေစု ပိုမိုရရှိလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းများကို ချဲ့ထွင့်သွားရန် စီစဉ်နေပြီး အဆိုပါ ဈေးကွက်များတွင် Daihatsu ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ပြည်သူ့စစ်အဖွဲဝင်တွေ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ရင် စစ်တပ်ရဲ့ညွန်ကြားချက် ယူဖိူ့ မလိုဘဲ တည်ဆဲဥပဒေရအရေးယူနိုင်
ပြည်သူ့စစ်အဖွဲဝင်တွေ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ရင် စစ်တပ်ရဲ့ညွန်ကြားချက် ယူဖိူ့ မလိုဘဲ တည်ဆဲဥပဒေရအရေးယူ နိုင်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးက လွတ်တော်မှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဦးအောင်ကြီး သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ။
“သမ္မတသည် ခိုင်မာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး မတည်ဆောက်နိုင်မည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်နေပြီး တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ် နေသည်။ သို့သော် တပ်မတော်အပေါ် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲ ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် အာဏာလေးနက်မှု မရှိသေးပေ။ ခေါင်းဆောင် ပိုင်းများတွင် ပြောင်းလဲလိုသူများရှိသကဲ့သို့
ဝသွေး စည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA)
အစိုးရ တပ်များသည် ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းရှိ UWSA တပ်ဖွဲ့ စခန်းများကို စာရင်း ပြုစုပေးရန် တောင်းဆိုနေပြီး၊ တချို့  စခန်းများ ဆုတ်ခွာရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ဆိုပါသည်။ UWSA တပ်များကလည်း အစိုးရ တပ်များ၏ တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းဆန် ရာမှ အစိုးရတပ်များသည် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ၂၇ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း သံလွင်မြစ်ကူး တံတားတာ့ဆန်းမှ တဆင့် လက်နက်ကြီး အပါအဝင် စစ်ကား အစီး၂၀ ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး အဆိုပါ စခန်းအား ဝိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဆိုပါ စခန်းသည် မိုင်းတုံမြို့နယ် တောင်ဘက် ၁၀ မိုင်ကျော် မဲကင် အရှေ့ဘက် မောက်စလီ အနီး၌ ရှိသော
ကော်မရှင်သည် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို စုံစမ်းရာ၌ ဆက်သွယ်ရေး သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် Myanmar Computer Emergency Response Team (mm CERT) အပါအဝင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကွန် ပျူတာကျွမ်းကျင်သည့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပူးပေါင်း စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စာနယ်ဇင်းအသိုင်းအဝိုင်းကို လည်း ခေါ်ယူ
ဥပဒေကြမ်း၏ သဘောတရားအရ တပိုဒ်ခြင်းစီကို သဘောတူ မတူ မေးမြန်ရပြီး ယနေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက အကြိမ် ၂၀ ခန့်အထိ သဘောတူမတူ မေးမြန်းရာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက အပျင်းထူကာ လိုက်မပြောခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပွင့်ဖြူ မဲဆန္ဒနယ်မှ